The Voice Journal – Page 259 – The Voice Weekly Myanmar
လူငယ်တို့အတွက် ပညာရပ်များစုဝေးရာ Online သင်တန်းကမ္ဘာ
ယနေ့လူငယ်လူရွယ်ကျောင်းသား ကျောင်းသူအတော်များများ Online သင်တန်းများနဲ့ စပ်လျဉ်းပြီး သိသင့်သလောက်သိထားကြပေမယ့် အများစုက Online သင်တန်းကနေ မိမိဘ၀အတွက် သို့မဟုတ် မိမိအထူးပြုဘာသာရပ်အတွက် အကျိုးရှိရှိအသုံးချနိုင်တဲ့အဆင့်အထိ မရောက်ကြသေးဘူးလို့ မြင်မိပါတယ်။ နိုင်ငံတကာမှာတော့ ပညာရေးဖွံ့ဖြိုးမှုအနိမ့်ဆုံးနိုင်ငံများမှသည် ပညာရေးစံ အကောင်းဆုံးလို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့...
နွေနေပူမှာ သင်္ကြန်လည်မယ့်သူတွေအတွက် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များ
နွေနေပူချိန်ခါ သင်္ကြန်လည်မယ့်သူတွေအတွက် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာထိခိုက်နိုင်မှု၊ သတိပြုစရာတွေကို ဆေးတက္ကသိုလ် (မကွေး)၊ ကာကွယ်ရေးနှင့် လူမှုရေးဆေးပညာဌာနက သရုပ်ပြဆရာဝန် ဒေါက်တာညိုကောင်းနှင့် The Voice Journal က မေးမြန်းထားတာတွေထဲက ကောက်နုတ်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ Voice : သင်္ကြန်တွင်းမှာအတွေ့ရများတဲ့ကျန်းမာရေးပြဿနာကိုသိပါရစေဆရာ။ Dr.NK...
Articles / Perspective
ထိရောက်တဲ့ ခေတ်မီအစိုးရတစ်ရပ်ဆိုတာ ဘယ်လိုအစိုးရမျိုးလဲ။ တစ်ဖက်မှာတော့ တောင့်တင်းခိုင်မာတဲ့ စွမ်းရည်ရှိတဲ့အစိုးရ၊ ဒါမှမဟုတ် နိုင်ငံတော် ရှိရမယ်။ တစ်ဖက်ကလည်း အစိုးရကို ထိန်းချုပ်တဲ့ ကျယ်ပြန့်တဲ့ နိုင်ငံသားတွေရဲ့အကျိုးအတွက် ဆောင်ရွက်ဖို့ဖိအားပေးတဲ့ ဥပဒေ ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ၊ တာဝန်ယူမှုတွေကို သင့်တင့်မျှတစွာ...
ပျက်သုဉ်းလာသော ရေအောက်နိုင်ငံတော်ကို ကာကွယ်နိုင်မည်လော
သန္တာကျောက်တန်းများ၊ ပင်လယ်မြက်များ၊ ငါးသယံဇာတများ၊ အဏ္ဏဝါဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများ ဟန်ချက်ညီဂေဟစနစ်ဖြင့် ရှိနေခဲ့ရာမှ ယခုမူ ငါးသယံဇာတများ နည်းပါးလာပြီဖြစ်သည်။ ပျက်သုဉ်းလာသော ထိုရေအောက်ကမ္ဘာ တစ်နည်း ရေအောက်နိုင်ငံတော်ကို ကာကွယ်နိုင်မည်လော။ မြန်မာ့ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းအတွင်း ငါးသယံဇာတလျော့ပါးလာမှုများကို ကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက် မှတ်ကျောက်တင်ခံနိုင်မည့် စီမံကိန်းတစ်ခု စတင်နေပြီ...
လူလုပ်လိုဏ်ဂူတစ်ခုဆီသို့ လူအများသွားလာနေကြသည်။ ထိုလိုဏ်ဂူမှာ ရိုးရိုးလိုဏ်ဂူ မဟုတ်ပေ။ အဘယ့်ကြောင့်သွား ကြည့်နေကြသနည်း။ ယင်းမှာ ထိုလိုဏ်ဂူကို အဖိုးတန်ကျောက်စိမ်းတုံးများဖြင့် စီခြယ်တည်ဆောက်ထား၍ဖြစ်သည်။ ဝင်လိုက်လျှင် အေးမြသည့်အတွေ့အထိကို ရမည်ဖြစ်ပြီး မမြင်ဖူး၊ ဆန်းသစ်သည့် မြင်ကွင်းများကို တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ ယင်းနေရာကား အမရပူရမြို့နယ်...
Articles / Society
ဥပုသ်နေ့တိုင်း ကိုယ်ပိုင်ဆေးခန်းကိုပိတ်ပြီး မန္တလေးမှ အင်းဝမြို့သို့ အမြဲမပြတ်သွားရောက် ဆေးကုသပေးနေသည့် မြန်မာတိုင်းရင်းသမားတော်တစ်ဦး ရှိသည်။ ထိုသမားတော်မှာ မန္တလေးမြို့တော်အခြေစိုက် သိနေဟဆေးခန်းပိုင်ရှင် ဦးသိုက်ထွန်း ဖြစ်သည်။ “ဒီဆေးခန်းကို လာရောက်ကြတဲ့လူနာတွေဟာ ကျွန်တော်ကခေါ်လို့ လာကြတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူး။ မြန်မာ့တိုင်းရင်းဆေးရဲ့ စွမ်းအားကိုသိလို့ အဝေးကြီးကနေ...
Articles / Thingyan Supplement
ရန်ကုန်လား မန္တလေးလား သင်္ကြန်ဘယ်မှာနွှဲမလဲ
ရန်ကုန်သူ မခင်လေးမွန်ရည်တစ်ယောက် ယခုနှစ်သင်္ကြန်ကို ရန်ကုန်တွင်ဆင်နွှဲရန် ဆုံးဖြတ်ထားသည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်များတွင် ရန်ကုန်သင်္ကြန် မစည်ကားသဖြင့် မန္တလေးသို့ သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့သည်။ မနှစ်ကပြုလုပ်ခဲ့သည့် မန္တလေး လမ်းလျှောက်သင်္ကြန်သည် တစ်နိုင်ငံလုံး၏ စိတ်ဝင်စားမှုကိုခံခဲ့ရပြီး အောင်မြင်ခဲ့သည့် သင်္ကြန်ပွဲတော်ဖြစ်ခဲ့သည်။ မခင်လေးမွန်ရည်ကဲ့သို့ ရန်ကုန် မြို့တော်သူ...
ဒီနေ့ ကျွန်တော် သုံးပတ်မှာ တစ်ပုဒ်ပဲ စာရေးပါတယ်။ ဒီလို ရေးနေတာ လေးလလောက် ရှိသွားခဲ့ပါပြီ။ ယခင်က နှစ်ပတ်မှာ တစ်ပုဒ် စာရေးခဲ့ပါတယ်။ ဘာကြောင့် စာရေးအား လျော့ကျသွားရပါသလဲ။ ဒီနေ့ NLD အစိုးရခေတ်မှာ စာရေးစရာသိပ်ရှားတယ်ခင်ဗျား။...
Articles / Business
ဒေါ်သန္တာ အောင့်ကာနမ်းခဲ့ရသည်မှာ တစ်ကြိမ်တစ်ခါတည်း မဟုတ်တော့ပေ။ ဆယ်စုနှစ်တစ်ဝက် နီးပါးကာလအတွင်း ကြိမ်ဖန်များစွာကြုံဆုံခဲ့သည်။ ယင်းမှာ အခက်အခဲကြုံချိန် ငွေ အရင်းအနှီးရှာဖွေခြင်းပင်။ “ပိုက်ဆံချေးပြီးတော့ သံသရာလည်နေတာ ငါးနှစ်လောက်ရှိပြီ” ဟု ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဒဂုံမြို့သစ် (မြောက်ပိုင်း) မြို့နယ်တွင် နေထိုင်သူ...
Features Stories / Stories
ဖုန်တလူလူဖြစ်နေသည့် လယ်ကွင်းအတွင်း ကျေးလက်ဒေသတွင်သာ ကျင်းပသည့် ပြိုင်ပွဲတစ်ခုကိုကြည့်ရန် စောင့်နေကြသည့် ပရိသတ်သည် နေရိပ်ထဲနှင့် နေပူထဲတွင်ပင် အစုလိုက်ရှိနေကြသည်။ ပြိုင်ပွဲဝင်ရန် ပြင်ဆင်နေသည့် အဖွဲ့ နှစ်ဖွဲ့ဖြစ်သည့် ရွှေညီကိုနှင့် ဆုတိုင်းကျော် တို့ကို စောင့်ကြည့်နေသူက ရာကျော်ရှိသည်။ ‘စပါတော့ဟေ့။...
Page 259 of 365« First«...102030...257258259260261...270280290...»Last »
၂၀၂၀ အတွက် လူချွန်လူကောင်းတစ်စု
‘ခေါင်းဆောင်ကောင်း’ မှသည် ‘Institution ကောင်း’ သို့
ကျောက်အုတ်တို့ ပြိုလေရာ (၅) (ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် နှစ်တစ်ရာပြည့်အကြိုဆောင်းပါး)
မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေးအကျပ်အတည်းနှင့် ထွက်ပေါက်ရှာဖွေကြည့်ရှုခြင်း
တရားစွဲခံထားရသော ဧရာဝတီတိုင်းလွှတ်တော် ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဟောင်းကို အာမခံပေး၊ မပေး ၂၈ ရက်နေ့ အမိန့်ချမည်
ပုဂံမြေမှ ပေါက်ဖော်တို့၏ ပရိယာယ်